Imitapo yolwazi eyishumi ehamba phambili eYurophu | Izincwadi Zamanje
Imitapo yolwazi eyishumi ehamba phambili eYurophu
Kwabanye, ipharadesi akulona nje kuphela amabhishi esihlabathi esimhlophe namanzi acwebezelayo. Uma uthanda ukuhamba futhi uthanda izincwadi, awukwazi ukuyeka ukubona le mitapo yolwazi emangalisayo.
Namuhla sizogxila kwimitapo yolwazi enhle kakhulu futhi edume kakhulu eYurophu. Sijoyine kulolu hambo ngaphandle kokushiya ikhaya.
1 Umtapo Wezincwadi WeRoyal Monastery yaseSan Lorenzo del Escorial, eMadrid
2 IStrahov Theological Hall, ePrague
3 Umtapo Wezincwadi wase-Abbey eSt Gallen, eSwitzerland
4 Umtapo Wezincwadi wase-Admont Abbey, e-Austria
5 I-Queens College Library, e-Oxford
6 I-Trinity College Library, eDublin
7 IRoyal Library yaseDenmark, eCopenhagen
8 Umtapo Wezincwadi waseStuttgart, eStuttgart
9 IBristol Central Library, eBristol
10 Umtapo Wezincwadi Kazwelonke waseFrance, eParis
Umtapo Wezincwadi WeRoyal Monastery yaseSan Lorenzo del Escorial, eMadrid
Akudingekile ukuthi uye kude ukucabanga ngalesi simangaliso se-Renaissance esiseSan Lorenzo del Escorial, yasungulwa nguFelipe II.
Inani lemiqulu emtatsheni wezincwadi lilinganiselwa ku-40.000. Phakathi kwazo, ikakhulukazi sizothola imibhalo yesandla ngesiLatini, isiGreki, isiHeberu, isi-Arabhu neSpanishi. Umtapo wezincwadi futhi unamanani ezinye izilimi ezifana nesiCatalan, isiValencian, isiPheresiya, iProvençal, isiNtaliyane ngisho nesiTurkey.
IStrahov Theological Hall, ePrague
Eyakhelwe ngo-1671 eStrahov Monastery, ungomunye wemitapo yolwazi yasendulo egcinwe futhi ebaluleke kakhulu. Isakhiwo esiyizifanekiselo sinezindlu ezingekho ngaphansi kwezinkulungwane ezingama-200.000. Phakathi kwazo kunemibhalo yesandla engaba ngu-3000 1500 kanye ne-incunabula engu-XNUMX XNUMX. Kufanele ukhokhele ukungena, yize izindleko zingabizi kakhulu futhi uvunyelwe ukuthatha izithombe nokuqopha amavidiyo. Ukuvakasha okuyimpoqo uma uya ePrague.
Umtapo Wezincwadi wase-Abbey eSt Gallen, eSwitzerland
Leli tshe eliyigugu le-rococo futhi elakhiwa ngo-1758, libaluleke kakhulu ezweni elingathathi hlangothi. Incane kodwa ihlaba umxhwele, inamanani ayi-160.000. Lesi sakhiwo sinentelezi engashiyi muntu engenandaba. Ngokucophelela okukhulu, baze banikeze nama-slippers lapho bengena ukuze bangalimazi phansi. Umbukiso womlando okungekho muntu okufanele awuphuthe.
Umtapo Wezincwadi wase-Admont Abbey, e-Austria
Akungabazeki ukuthi indala kunazo zonke futhi empeleni inamandla kulo lonke elase-Austria. Lo mtapo wezincwadi wanikezwa inkosi u-Abbot Matthäus Offner kumakhi wezakhiwo uJoseph Hueber. Oqale ukwakha ngo-1776. Ithathwa njengomtapo wezindela omkhulu kunayo yonke emhlabeni. Ihlala nezinhlobo ezingama-200.000, yize kulinganiselwa ukuthi zingama-70.000 XNUMX zabuyiselwa. Phakathi kwezinto ezivelele kukhona umbhalo wesandla okhanyisiwe we-Admont Bible.
I-Queens College Library, e-Oxford
Ihlanganiswe ne-University of Oxford, inemiqulu engama-50.000. Okufanele isigodlo, kuyinsalela okungekho mthandi wencwadi okufanele ayiphuthe. Into enhle ngeLabhulali Ephezulu ukuthi isasebenza. Ungakucabanga ukulungiselela izivivinyo zakho endaweni enjengale?
I-Trinity College Library, eDublin
Y Voila! Lo kwakungumtapo wolwazi okhethwe ukudubula izigcawu zikaHarry Potter kanye nesiboshwa sase-Azkaban. Kufanele ukhokhele ukungena, kepha cishe ama-euro angama-14, uzoba nohambo oluqondisiwe. Into efaneleke kakhulu ngomtapo wezincwadi, ngaphandle kokwakhiwa kwawo nemvelo, yi Incwadi yamaKells.
IRoyal Library yaseDenmark, eCopenhagen
Eyaziwa nangokuthi "iBlack Diamond", iyisihlalo esibaluleke kunazo zonke seLabhulali yaseCophenague. Amakhophi angaphezu kuka-250.000 asatshalaliswa ezitezi eziyisishiyagalombili namakamelo okufundela ayisithupha. Isakhiwo sesimanjemanje esakhiwe ngemabula emnyama nengilazi esibheke olwandle, kwenze kube ukuhambela okubalulekile enhlokodolobha yaseDenmark.
Umtapo Wezincwadi waseStuttgart, eStuttgart
Ukufunda nezakhiwo. Noma ngabe ukhetha ini, leli yisayithi lakho. Lo msebenzi ka-Eun Youn Yi ubhekwa njengomunye wemitapo yolwazi ehamba phambili emhlabeni. Indlela eyakhiwe ngayo yesimanje, isikhala nokukhanya kwayo, ishiya labo abayivakashelayo bevule imilomo. Kulesi sakhiwo esikhulu kukhona nokusayinwa kwamabhuku, imicimbi nemibukiso.
IBristol Central Library, eBristol
Lesi sakhiwo njengoba sisazi namuhla sakhiwa ngo-1906, ngezikhathi ze-Edoardine. Igcina izincwadi ngesiSomali, isi-Arabhu, isiBengali, isiShayina. IsiKurdish, isiPastu, isiPunjabi, isiVietnam, isiCzech, isiFulentshi, isiJalimane, isiNtaliyane, isiPolish, isiPhuthukezi, isiRashiya kanye neSpanishi. Ngaphezu kwalokhu, ababhalisile nsuku zonke nabanyanga zonke bangenziwa emaphephandabeni aseYurophu, e-Afrika naseMpumalanga.
Umtapo Wezincwadi Kazwelonke waseFrance, eParis
IBnF noma iNational Library yaseFrance, ingenye yemitapo yolwazi ebaluleke kakhulu ezweni. Indlunkulu yayo enkulu, uFrançois Mitterrand, itholakala eTolbiac, eningizimu yeParis. Kunesinqumo emtatsheni wezincwadi esidinga ukuthi kugcinwe ikhophi layo yonke imisebenzi eshicilelwe eFrance. Inengqikithi… yezincwadi eziyizigidi eziyi-13, ezisatshalaliswe kuzo zonke izindawo zayo. Lezi ezine esizithola eParis yiNdlunkulu yeF.
Lokhu kumane nje kuyinothi elincane lezimangaliso esingazithola eYurophu. Ngakho-ke manje niyazi, zikhuthazeni ngokuxuba izincwadi nokuhamba futhi ningayeki ukuvakashela le ngcebo emnandi nefanekisayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Imitapo yolwazi eyishumi ehamba phambili eYurophu
Ngiyabonga kakhulu ngokuhlanganiswa. Kimi okunye okuhle kakhulu umtapo wolwazi weSigodlo Sikazwelonke saseMafra, ePortugal, esimangalisayo.
Izizathu eziyi-8 zokufunda izindaba nezindaba eziningi
Ukuhlaziywa okufishane komsebenzi "uDon Juan Tenorio" kaJosé Zorrilla